RC Cars for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 ejikelezayo 4WD Cima Road amacala amabini ejikelezayo shiti - 2.4Ghz High Speed ​​Rock qha Vehicle kunye izibane Abantwana Birthday Gifts RC Car for Kids - Jomo Technology Co., Ltd
RC Cars for Kids KOOWHEEL Remote Control Car 360 ejikelezayo 4WD Cima Road amacala amabini ejikelezayo shiti - 2.4Ghz High Speed ​​Rock qha Vehicle kunye izibane Abantwana Birthday Gifts RC Car for Kids
Isantya 1.High kwaye yeka indlela: Le moto iye Motors ezimbini ezinamandla kunye 4WD, ukuqinisekisa ngesantya esiphezulu. Amavili nezimo kakhulu, kulula ukwenza amathuba ngokukhawuleza.
Isipho 2.Best for kids: kunye nenkqubo yolawulo kude 2.4GHz irediyo, imoto RC wosuku lokuzalwa egqibeleleyo, iKrismesi izipho abantwana.
3.All iintlobo lamaqhinga: 360 degree yoyilo zithutha ezilingayo, ifanele abantwana bakho okanye iimoto zokudlala Umthandi. Amacala Double ebaleka, phambili, ngasemva, ajike ngasekhohlo, jika ngasekunene, 360 isidanga shiti ezilingayo. Imoto RC nje ugcina phambili kungakhathaliseki ukuba yintoni na hits okanye izisa ngayo, kukunika amava eyahlukileyo epholileyo!
Impahla 4.High kwizinga: ezikumgangatho ophezulu iplastiki, niqinile nomzimba imoto ixesha elide, ruggedness kunye crashworthiness. Amavili zenziwe iirubber, kulula ukoyisa nayiphi na imeko yangaphandle.
5.Guarantee: imoto isebenzisa 3.7V 400mAh ibhetri egcwalisekayo (kubandakanywa) kunye USB (kuquka), 15 - 20 imizuzu ixesha lokudlala, iiyure ezi-2 Ukutshaja ixesha. KOOWHEEL ukunika imali epheleleyo okanye ukutshintsha enye ukuze kwisithuba seentsuku ezingama-30. Ready to impendulo 24 hours.So Yongeza kwinqwelo ngoku!
Previous: RC Cars KOOWHEEL 1:16 Isikali 2WD Cima Road Ulawulo Olukude Cars nge-2 zitshajwe Battery 2.4GHz Radio Remote Control Truck Monster Speed ​​High qha USB Charger RC Car for abadala kunye Kids (blue)
2.4G Isilawuli CAR
2.4 GHz ulawulo radio: strong anti-uphazamiseko, nto leyo yenza iimoto ezininzi ukuze ezibaleka kunye ngexesha elinye kunye nendawo. Ukuba ufumana 2 ngaphezulu KOOWHEEL RC truck, kuya kuba mnandi kakhulu ukuba ukubaleka icala iimoto ezininzi ecaleni.
Ulawulo umsebenzi Full, phambili / ukubuyisela / ekhohlo / ekunene. Le Car ulawulo Isilawuli steering ezinzileyo kakhulu kwaye umcephe wokunyusa, kude ergonomic kuqinisekisa ulawulo ebalaseleyo abasaqalayo.
izizathu 3 ngezantsi ye-ukuqhuba elifutshane lixesha ibhetri: Ixesha ehlaselayo lifutshane kakhulu ukuxhasa umdlalo.
Wena ayizange iphele ze battery phambi ukutshaja.
Ubomi bebhetri iya ulenze lufutshane ukuba ndayishenxisa ibhetri ukusuka emotweni emva kokusetyenziswa.
RC imoto x1
Control Remote x1
zitshajwe 6.4V / 700mAh ibhetri Car x2
USB itshaja x1
iziqwengana Radio: 2.4GHz
ixesha Ukutshaja: 180mins
ubomi Battery: malunga 15mins
Ulawulo Distance: iinyawo 100
Isantya: 15km / H
Car ibhetri: 3.6V 600mA battery
yebhetri Isilawuli: 2 * 1.5V AA amabhetri ( Not Okuqukiweyo)
Imisebenzi: Turn ekhohlo, jika ngasekunene, phambi, emva
Package Imilinganiselo: 16.1 x 11 x 3.9 intshi
ubunzima Net: 1.1 neekhilogram
-ngenyanga 12 kulana iwaranti, konke for zokulungisa.